YAAB: Mancini Oo Sheegay In Austria Ka Adag Tahay Belgium & Portugal Iyo Midka Uu Doonayo Labadan Waddan Oo La Su'aalay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaYAAB: Mancini Oo Sheegay In Austria Ka Adag Tahay Belgium & Portugal Iyo Midka Uu Doonayo Labadan Waddan Oo La Su’aalay
YAAB: Mancini Oo Sheegay In Austria Ka Adag Tahay Belgium & Portugal Iyo Midka Uu Doonayo Labadan Waddan Oo La Su’aalay
Tababaraha xulka qaranka Talyaaniga ee Roberto Mancini ayaa ku dooday in kulankii Austria uu yahay mid kaga adkaan doona dalka ay la ciyaari doonaan wareegga siddeedda oo Belgium iyo Portugal midkooda soo baxa ay la ciyaari doonaan.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa si dhib badan ugu soo baxay wareegga siddeedda kaddib markii ay ciyaar lagu daray 30 daqiiqadood oo dheeraad ah ay 2-1 kaga adkaadeen Austria.
Federico Chiesa iyo Matteo Pessina oo beddel kusoo galay ayaa Talyaaniga u xaqiijiyey guusha, waxaanay goolashu yimaaddeen waqtigii dheeraadka ahaa, iyadoo Talyaaniga ay u ahayd kulankii 31aad oo xidhiidh ah ee aan laga badin.
Belgium iyo Portugal midkooda caawa soo gudba ayay la ciyaari doonaan, waana laba waddan oo loo saadaalinayo oo adag oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka, hase yeeshee Roberto Mancini ayaa ku dooday in marnaba aanay noqonayn kuwo u adag sidii Austria.
“Waxaanu keenay guusha sababtoo ah waanu u qalmaynay, xataa inkasta oo la naga dhaliyey gool koorne ah, aananu ogolaanay in shabaqayaga la taabto horreyso ama dambayso ba.” Ayuu yidhi Mancini.
Ciyaartoyda beddelka ku timid ee saamaynta badan ku yeeshay ciyaaarta ayuu amaanay isagoo yidhi: “Ciyaartoyda beddelka ku yimid waxay lahaayeen maskaxdii ku habboonayd, waxaanay markiiba isbeddel ku sameeyeen ciyaarta. Laacibiinta soo galay ayaa cajiib ahaa, kuwa soo baxayna wax walba way sameeyeen.”
Intaas kaddib ayuu Roberto Mancini ka hadlay dalka ay la ciyaari doonaan wareegga siddeedda ee Portugal ama Belgium, waxaanu yidhi: “Waan ogaa in ciyaartani noqonayso mid adag, waxa laga yaabaa inay xataa ka adag tahay waddanka aanu la ciyaarayno wareegga siddeedda.”
Mar la weydiiyey midka uu jeclaan lahaa inuu la ciyaaro Belgium ama Portugal oo caawa soo kala baxaya, waxa uu Mancini ku jawaabay: “Waa laba kooxood oo qayru-caadi ah, aad ayay u adag tahay in aan kala doorto.”